အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းသော ဂုဏ်သတင်းရရှိပါက ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက် ဈေးကွက်တွင် ရန်ကုန်သည် န - Yangon Media Group
မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းသည်ဆိုသော ဂုဏ်သိက္ခာသာရရှိပါက ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဈေးကွက်တွင် ရန်ကုန်သည်နာမည်ရှိသော ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က ရန်ကုန် မြို့ Junction City Tower ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာကျောက်မျက်ပညာသိပ္ပံ (Gemological Institute of Myanmar) ၏ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲနှင့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန် ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ”၂ဝ၁၈ အတွင်းမှာ ရွှေနဲ့ကျောက်မျက်ရတ နာဈေးကွက်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန တွေဘက်က တွန်းအားပေးနေတာ ရှိပါတယ်။ စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်း ဒီမှာရွှေနဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာဈေးကွက် တစ်ခု ထူထောင်ဖို့ရှိပါတယ်။ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနကလည်း တွန်းအားပေးနေတဲ့သဘောရှိပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့ ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုထူထောင် နိုင်ဖို့အတွက် တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်။ စိန်တွေအခြားကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ပြပွဲကြီးတွေမှာ လာရောင်းနိုင်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ရတနာပြပွဲဟာဈေးလည်း သက်သာတယ်။ ပစ္စည်းအရည်အသွေး လည်းမှန်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ပစ္စည်းတွေကိုသွင်းရ၊ ထုတ်ရ၊ ဝယ်ရတဲ့နေရာမှာလည်း အစိုးရရဲ့စီမံ ခန့်ခွဲမှုတွေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာသာရမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်ဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ နာမည်ရှိတဲ့ဈေး ကွက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟုပြောကြားသည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတွင်နာမည်ကြီးနေသော်လည်း ယင်းနယ်ပယ်တွင်ကျယ်ပြန့် သော ဈေးကွက်တစ်ခုရယူနိုင်ဖို့ရာ အားနည်းလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက”မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကျောက်မျက်ရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နယ်ပယ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုကိုရယူနိုင်ဖို့ရာမှာအားနည်းနေပါတယ်။ နိုင်ငံတ ကာမှာရှိတဲ့ပြပွဲတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကကျောက်မျက် တွေကို အပုံလိုက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ မိုးကုတ်ကပတ္တမြားတွေဆိုရင် ဘန်ကျောက်ပြပွဲမှာအပုံလိုက် တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ဈေးကွက် တွေမှာ ကြုံနေရတာကတော့ကိုယ် ရောင်းမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုယ် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းကနေ ဓာတ်ခွဲပေးပြီး စာရွက်စာတမ်းထုတ် ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြေစာတစ်ခုအနေနဲ့သာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အလယ်ထိရပ်တည်နိုင်ဖို့က အလှမ်းဝေးနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
ကျောက်မျက်ပညာရပ်တိုးတက်ပြန့်ပွားခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ကဏ္ဍဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးအောင် မြင်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ် စေရန် မြန်မာကျောက်မျက်ပညာသိပ္ပံ (Gemological Institute of Myanmar) ကို ကျောက်မျက် သင်တန်းကျောင်း၊ ကျောက်မျက် ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကျောက်မျက်သု တေသနဌာနဟူ၍ အဓိကအစိတ် အပိုင်းသုံးခုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ Junction City Tower အခန်းအမှတ် ဝ၆-ဝ၈ တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲ နန်းယွန်းမြို့တွင် ကျင်းပ၊ ယခုနှစ်ပွဲတော်တွင် နိုင်င?
အသင်းကို အရာရာ ဦးဆောင် ကစားနိုင်မည့် ကစားသမားကောင်း မရှိဟု မာတစ် ဆို
ကန်တော့ခံ သက်ကြီးစာပေပညာရှင် ၂၄၅ ဦးအား ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ ကျင်းပ၊ ကန်တော့ခံများတွင် ဗိုလ်ခ??
မကွေးမြို့နယ် အတွင်း မိုးမရွာသောကြောင့် မြေပဲပေါ်ချိန်တွင် အထွက်နှုန်းကျဆင်းကာ တောင်သူမျာ??